Aiza no misy an'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Aiza no misy an'i Jesosy?
Eny, velona Jesosy, ary mitoetra ao amin’izay rehetra nandray Azy ho Mpamonjy sy Tompo Izy. Nilaza i Paoly fa nohomboana niaraka tamin’i Kristy izy. Izany no nahatonga azy hiteny hoe: “Kanefa mbola velona aho; fa tsy izaho intsony, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo, dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” (Gal. 2,20).
Ny fiainana ny fiainan’i Kristy dia midika fa fanehoana ny fiainana niainany teto an-tany isika. Miroboka ao anatin’ny fiainany ny fiainantsika ary miray aminy. Ity fanambarana ny maha-izy azy ity dia an'ny sandriny iray amin'ny lakroa momba ny maha-izy azy izay naorinay. Ny fanehoam-pitiavana sy fiahiana ataontsika dia manaraka ho azy ny fiantsoana antsika (ny fototry ny hazofijaliana) rehefa lasa zavaboary vaovao (ny hazo fijaliana) ny olona iray ary arovan'ny fahasoavan'Andriamanitra (ny hazofijaliana).
Fanehoana ny fiainan’i Kristy isika satria Izy no tena fiainantsika (Kol. 3,4). Olom-pirenen’ny lanitra isika fa tsy an-tany, ary monina tsy maharitra amin’ny vatantsika ihany. Ny fiainantsika dia tahaka ny fofon'aina izay manjavona ao anatin'ny indray mipi-maso. Jesosy ao anatintsika dia maharitra sy tena misy.
Ny Romana 12, Efesiana 4-5, ary Kol. 3 dia mampiseho amintsika ny fomba hiainana ny tena fiainan’i Kristy. Voalohany dia tsy maintsy mifantoka amin’ny zava-misy any an-danitra isika, ary avy eo mamono ny zava-dratsy miafina ao anatintsika (Kol. 3,1.5). Ny andininy faha-12 dia manazava fa “amin’ny maha olom-boafidin’Andriamanitra antsika, masina sy malala, dia tokony hisarika famindram-po mafana, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana isika”. Mampianatra antsika toy izao ny andininy faha-14: “Ary ambonin’ny zavatra rehetra, [tafio] ny fitiavana, fa fehin’ny fahatanterahana izany”.
Aiza àry no misy an’i Jesosy ankehitriny? Mipetraka eo amin’ny toerana misy antsika Izy (Kol. 1,27b). Avelantsika hamirapiratra ve ny fiainany sa ataontsika mihidy izy, miafina lalina ka tsy ho voamarika na hanampy ny hafa? Raha izany no izy, dia aoka hanafina ny fiainantsika ao aminy isika (Kol. 3,3) ary aoka isika hamela azy hiaina amin’ny alalantsika.